Depression Mujigae heads for Vietnam | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
Depression Mujigae heads for Vietnam
The seventh storm to hit the East Sea this year will reach the central provinces of Thanh Hoa and Nghe An and some northern provinces, the National Center for Hydro-Meteorological Forecasting said on Friday morning.
Moving at an average speed of 20 kilometers per hour, Typhoon Mujigae may cause flooding along the central coast, landslides and flash floods in upland regions, and rain in the north, the center said.
Meanwhile, the widespread rain caused byatropical low since last Thursday is easing, the regional Flood and Storm Protection Center for the central and central highlands provinces said on the same day.
So far, the rain and subsequent flooding have caused VND286 million (US$16 million) in property damage in five central provinces, with Quang Tri the hardest-hit.
The weeklong bad weather has killed eight people and left three missing in the central and central highlands regions, Tuoi Tre newspaper quoted from the Central Steering Committee for Flood and Storm Protection’s latest statistics.
Posted in Weather News. Tags: MUJIGAE, tropical-storm, weather.3Comments »
3 Responses to “Depression Mujigae heads for Vietnam”
Tropical Storm MUJIGAE (MARING) now traversing the Gulf of Tonkin…prepares its final landfall over Northern Vietnam later tonight.
ညီအစ်ကိုတို့ေ၇ ဆိုင်လား မဆိုင်လားတော့ မသိဘူးဗျာ။ ဒီမှာ နေမကြတ်ခင်က ကွန်းမန့်လေးတစ်ခု ဝင်ေ၇းခဲ့တယ်။ နေကြတ်ပြီး တစ်လမကြာခင်မှာပဲ မြန်မာပြည်ကို အဖျားခတ်သွားတဲ့ ငလျင်နဲ့ နောက်ပိုင်းနှစ်လမတိုင်မီမှာ အင်ဒိုငလျင်ကြီးနှစ်ခု လူပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်တယ်ပဲ ပြောပြော ဟုတ်သော်မ၇ှိ မဟုတ်သော်၇ှိ အမှတ်တ၇ အဖြစ် ဒီပို့စ်အောက်မှာ လာေ၇းသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့က နေကြတ်တာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ငလျှင်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းတဲ့ သီအိုရီကို စတင်ဖေါ်ထုတ်ရေးသားခဲ့တဲ့ Britton LaRoche ရဲ့ ဘလော့မှာတော့ သီအိုရီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်လေ့လာသုံးသပ်နေကြဆဲပါဘဲ။
သူ့ရဲ့ သီအိုရီစပြီး တင်ခဲ့တဲ့ ဘလော့ပို့စ် က Japanese Quake and Tsunami Predicted July 22 2009 မှာပါ။
နေကြတ်တာ၊ လကြတ်တာ၊ လရဲ့ဆွဲငင်အား၊ ဂြိုလ်တွေရဲ့ ဆွဲငင်အားတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့ကျောက်လွှာချပ်ကြီးတွေ(Tectonic Plates) အပေါ်သက်ရောက်တဲ့အားတွေကတစ်ဆင့် ငလျှင်တွေ ဆက်တိုက်လှုပ်ခဲ့တာကတော့ အမှန်ဖြစ်နေတာကြောင့် သူ့သီအိုရီကို မှန်ကြောင်းလဲ သိပ္ပံပညာရှင်များက ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ မကြာတော့တဲ့ အနာဂတ်ကာလမှာ မြေငလျှင် လှုပ်ခတ်မှုကြီးတွေကို ကြိုတင်လေ့လာခန့်မှန်းနိုင်ကြတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ လူသားတွေအားလုံးအတွက် တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကာကွယ်နိုင်တာတစ်ခု ဖြစ်လာမှာမို့ ဆက်ပြီးလေ့လာနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
အခုလိုဝင်ရေးပေးတဲ့ YoungGun ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။
« MUJIGAE ဟိုင်နန်ကျွန်းသို့ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့(သတင်း)
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း “Fifteen” »